Isikolo seBhodi yokuGcina - UkuPakisha iZiko lakho
Uya esikolweni sokubhukuda. Yeka indlela enhle ngayo! Ewe, kuyinto eyoyikisayo ukushiya ikhaya lakho kwaye uqhubele kwindawo engaqhelekanga. Kodwa cinga ngako ngale ndlela: konke kuya kuba kutsha, kuluhlu kwaye kuyonwaba! Kwaye wenza njalo ngaphambi kokuba ininzi abantwana bayenze, kuba abaninzi abantwana bahamba ekhaya okokuqala xa beya kwiikholeji.
Ngoko, yintoni omele uyizise ekhaya? Ewe, isikolo siza kukunika uluhlu oluchanekileyo lwezinto ezifuna ukuba zizise, ​​kwaye sinoluhlu lwezinto ezibalulekileyo kuwe apha .
Qinisekisa ukuba unayo yonke into. Kodwa yintoni enye enokuyifuna? Khangela olu uluhlu lweebhodi zesikolo zebhodi eziza kunceda ukwenza amava akho abe ngcono.
Uninzi lwabafundi abakwazi ukuhlala ngaphandle kweengoma zabo. Ukuba unendlela efanayo, qiniseka ukuba ulayishe uluhlu lwakho lwe-iTunes kunye nomculo wamva okanye ufumane ukubhalisa kwi-Pandora, Spotify okanye enye inkonzo yomculo. Ungalibali ukubuyisela nayiphi na ishaja oyifunayo okanye nakwezinye izithethi eziphathekayo. Isethi esongeziweyo seendlebe asizange sikwazi ukulimaza, kunye nesethi yentsimbi ekhonsayo. Awukwazi ukuba kuza kubakho ubusuku obukhulu ekudleni kwaye ufuna ukufumana umsebenzi wesikolo okanye uqale ukulala ekuhambeni kwasekuqaleni, kwaye ukuphunyuka ngomculo wakho ozithandayo kunokukwazi okokufunayo. Yenza nantoni na izixhobo ezifunayo ukuze uzikhuphe zonke, kwakhona.
2. iPoptop kunye nePrinta
Esi sikolo mhlawumbi siza kuchaza uhlobo lwekhompyutheni ofuna ukuyiletha. Kungaba nokuba yinxalenye yemali yakho yencwadi yokuqala yonyaka.
Kwimeko nayiphi na imeko uya kufuna i-laptop yakho kunye nayo nayiphi na i-CD ebalulekileyo njengendlela yokusebenza / ukubuyisela idiski, isofthiwe yakho yokulwa ne-virus, njl njl.
Umshicileli wezinto ezininzi ulinganisela ubunzima bawo kwigolide. I-hub ye-USB iya kuba luncedo ukudibanisa zonke iinkalo zakho. Qinisekisa ukuba unayo yonke i-dongle efunekayo kunye neentambo ukuze wenze konke ukudibanisa, kwaye usenokucinga ukuthenga ishaja esongezelelweyo.
Ngaloo ndlela, unokushiya ishaja enye kwisigumbi sakho sokulala kwaye ushiye enye esikhwameni sakho mhlawumbi.
3. Izinto zokusebenza zezemidlalo
Izakhono, i-skis, i-soccer cleats, iiklabhu zegalufu, i-tennis kunye ne-squash, i-squim, i-saddle, i-riding crop and boots. Naliphi na lezi zinto zingabakho kwiluhlu lwakho kuxhomekeke kwixesha kunye nendawo yesikolo sakho. Akufuneki konke ukuza nawe; Unokuhlala ulungise izinto kwi-intanethi uze uzinikele kwikampus. Okanye, qiniseka ukuba unesixhobo semidlalo oyifunayo semester yokuwa. Unako ukuthabatha abanye xa usuka ekhaya ngenxa yekhefu kunye neholide.
Nangona kuya kuba nemithetho malunga nokuba nini na apho ungasebenzisa ifowuni yakho, uya kuyidinga. Qinisekisa ukuba isicwangciso sakho senkonzo sivumela ukuthumela imiyalezo engenamkhawulo kunye nokubiza jikelele. Ungalibali ishaja kwaye mhlawumbi ulethe ezimbalwa. Unokucinga ngokuthenga ishaja yangaphandle ukugcina unikwe amandla njengoko uhamba. Iimeko ezifanelekileyo zinokukhusela nefowuni yakho ekuchaseni nasekukhutsheni.
5. Inkokhelo kunye neKhadi le-ATM
Uninzi lwezikolo luza kukunika ithuba lokufumana i-akhawunti emiselwe ibhanki yasekuhlaleni, ukuba uyayifuna enye, eya kukunika ikhadi le-ATM. Isikolo sakho sinokubonelela ngesicwangciso sokuthenga i-campus ngokusebenzisa inkqubo yekhadi elilodwa okanye ukumiswa okufanayo.
Kodwa, unokuba ufuna ukucinga ukuba nekhadi lesikweletu ehlukile kulazo ziphumo ezingalindelekanga. Sebenzisa ngokukhawuleza ukuthenga okungaqhelekanga kuphela, kwaye qinisekisa ukuba wena nabazali bakho ninokuqonda ngokucacileyo malunga nokuba ungayisebenzisa kangakanani ngenyanga.
Yiba nekhadi le-ATM. Ukuthintela ukukhwabanisa abazali bakho bagcina inani eliqingqiweyo kwiakhawunti yekhadi le-ATM. Bahlala befaka imali engakumbi njengoko kuyimfuneko.
Ukulahlwa esikolweni esikwangasese: Ngoku?
Ama-Apostrophes asetyenziswa ngokusetyenziswa ngesiSpanish
Ukuguqulwa kweNtlalontle ye-American Medicine
Unkulunkulu we-Spring Equinox
Du, De La, Des: Ukuvakalisa izinto ezininzi ngesiFrentshi
Ubomi be-Asian American Black Panther uRichard Aoki